China Simple Silver Jewelry Gold Plated Small Hoop Huggie Earring Mepụta na Factory | Lovehụnanya & Mma ọla
Ihe ịchọ mma ọla ọcha 925 Sterling
Ọla Ọla Dị Mfe Edobere Obere Hoop Huggie Earring
Ọla ọla ọcha dị Mfe
Ihe: Ejiri ọla ọcha s925 mee, na-enweghị nkume, nha dị obere, dabara adaba maka uwe kwa ụbọchị.
Nkọwa nkọwa: Imewe elu dị elu na-atọ ụtọ ma mara mma;
Ngwunye ọla edo adịghị mfe ịla n'iyi, ọ dịkwa mma iyi, nke dabara adaba maka uwe kwa ụbọchị.
Nlekọta: na-echetara gị nke ọma ka ị zere mmiri, kemikal, ihe ndị dị nkọ, wepụ ọla ntị mgbe ị na-ehi ụra.
Omuma ọla imewe, ọmarịcha, mara mma na mfe ikuku, na-eji ire ụtọ na idiocha arc imewe, ịma mma bụ ọmarịcha si ihe na nka nka, kpochapụwo udi na-agbakwụnye a fashionable amara na nwanyị, fashionable na anya-akụta, mara temperament.Any ọ bụla. Ụdị imewe dị ka ọ dị mfe bụ ihe pụrụ iche nke nkà onye mmepụta ahụ, ọ bụghị iji merie anya na agba ndị ikwubiga okwu ókè, ma iji merie obere mmetụta na-adọrọ adọrọ. Ile anya na ya, ị ga-enwe mmetụta nke nchapụta nke ígwè ya na-egbuke egbuke. Metụ ya aka, ị ga-emeri. nwee mmetụta dị arọ ya site n'obi gị.
Ọmarịcha ọla edo 925 a họọrọ nke ọma na-acha ọla edo na-egbuke egbuke, ọdịdị mpụga na mmetụta dị n'ime na-ejikọta ya, na mmetụta pụrụ iche nke okomoko na-abịa. Ọkà nka mara mma, nkọwa zuru oke nke usoro electroplating, ihe ngosi nke ọma, agba na-egbuke egbuke na-adịte aka. ọzọ adaba na-eyi, ike na safe.Real ọlaọcha ihe onwunwe, adabara mwute akpụkpọ.
Ibu ọla ọcha
Efere ọla edo
Nabata na nnabata
Kwado ịkwado omenala agba ọzọ
The ọla ntị hinged azụ na post snap ọnụ na ìhè nrụgide na igbachi n'ime ebe na obere notches. Ọcha ọcha adịghị mfe tarnish na dị ọcha oxygen gburugburu ebe obibi. Otú ọ dị, ọla kọpa nke dị na ọlaọcha 925 nwere ike imeghachi omume na ozone na hydrogen sulfide dị n'ikuku ma mee ka ọlaọcha mara mma merụọ. Ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ịgbasa ntutu isi, na ọsụsọ na-egbu egbu nwekwara ike ime ka ọ na-etolite ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ iresị ihe ọla edo edo edo gị ma chọọ ịma ma ọ bara uru ihe ọ bụla, nke bụ́ eziokwu bụ na ihe ọla edo edobere adịghị ọnụ ahịa nke ukwuu. Ihe kpatara nke a bụ na mkpuchi, ma ọ bụ oyi akwa, ọla edo dị n'èzí nke ihe ahụ dị gịrịgịrị nke na ọ bụ naanị micron ole na ole nke ọla edo na-etinye.
Ogologo oge ole ka ọla-ọcha mgbanaka ọla edo ga-adịru?
Ná nkezi, ọla edo edobere ọla nwere ike ịdịru ihe dị ka afọ abụọ tupu ịgbanye ọla edo amalite ịkatọ ma daa mbà.
Nke gara aga: Ejiji Ejiji Egwurugwu Cubic Zirconia 925 Silver Hoop Huggie Earring
Osote: 925 sterling silver square amethyst mgbanaka N'ogbe trendy mgbanwe njikọ aka agbamakwụkwọ eke gemstone mgbanaka
Cubic zirconia Huggie Hoop ọla ntị
Ọkụ Huggie Hoops
Hoop ọla ntị mmakọ
Huggie Hoop ọla ntị
Huggie Hoop ọla ntị ọla edo
Huggie Hoop ọla ọcha
Egwurugwu Huggie Hoop ọla ntị
Ọla ọla ọcha Huggie Hoop
Obere ọla ntị ọla edo Huggie
Obere ọla ọla edo Huggie
Obere ọla ntị Huggie
Obere ọla ntị Hoop Huggie
Sterling Huggie Hoop ọla ntị
Ọla ntị Sterling Silver Huggie Hoop
Ọla ọla ọcha Huggie ọla ntị
Oyi ejiji na-acha anụnụ anụnụ Spinel Snowflake Jewelr...
Ejiji Ejiji Egwurugwu Cubic Zirconia 925 Silver Hoop ...
Asymmetric Earrings ọla pụrụ iche Aka & ...
925 Sterling Silver Hoop ọla ntị mara mma mmiri ozuzo...